Midowga Dhalinyarada Soomaaliyed oo maanta Dood cilmiyeed ugu qabtay Magaalada Muqdisho Odayaasha dhaqanka
Midowga Dhalinyarada Soomaaliyed oo maanta Dood cilmiyeed ugu qabtay Magaalada Muqdisho Odayaasha dhaqanka.
Hey'adda Midowga Dhalinyarada Soomaaliyeed ee UYS ayaa maanta Dood cilmiyeed halku dhigiisu ahaa sida loo xoojin karo Tubta toosan ee Nabada, loogana wada shaqeeyo ammaanka, kaasoo ay ka qeyb galeen Odayaasha dhaqanka.
Dood cilmiyeedkan ayaa ahaa mid Odayaasha ay ku lafa gureen xaalada kala guurka ee uu dalka ku jira, iyo sidii looga gudbi lahaa marxaladihii la soo maray, oo aan dib loogu laaban.
Abuukar Sheekh Cusmaan (Abuukar Ganey) oo ugu horeyn ka hadlay dood cilmiyeedka ayaa sheegay in wax walba ay wanaagsan tahay in dhinaca horumarka laga eego, isagoo xusay in umada Soomaaliyed ay soo mareen dhibaato iyo colaado, haatana la joogo xilligii horumarka iyo nabada.
"Qof kasta oo Soomaali ah, hadii aqoonyahan uu yahay, hadii siyaasi yahay, hadii dhalinyaro yahay, oday, culumo, intaba waxaa looga baahan yahay inay iska xil saaraan inaan dib loo noqon marxaladii la soo maray, in halgan loo galo sidii kooxeysi looga bixi lahaa, danta umadana looga shaqeyn lahaa"ayuu yiri Abuukar Ganey.
Xildhibaan Cali Seeko oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamaanka ayaa ku guubaabiyay Hey'adda UYS inay sii wado wacyi gelinta iyo kulamada nabada looga hadlayo, si bulshada u gaaraan himiladooda.
"Waxaan ku gubaabinayaa Hey'adda UYS howsha baaxada leh ee bulshada u heyso inay sii wado, waxaa kaloo muhiim ah in nabada iyo is dhex galka bulshada aanu xoojin, inaan dib ugu laaban 92-dii, in la isku tanaasulo, dalka dowlada ka jira madaxda dowladda waa shaqaale shacabka u adeegayaan"ayuu yiri Xildhibaan Seeko.
Xildhibaanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in la isku xirnaado, min degmo, Waax ilaa Laan, dadkana ay noqdaan kuwo iska war qaba, taasoo uu xusay inay tahay tan kaliya ee nabada lagu gaari karo, isla markaana xaafadaha ay iskugu xirmaan min labo guri ilaa boqol.
Caaqil Xasan Cilmi Yaxye oo ka mid ahaa dhaqanka Soomaaliyed ayaa sheegay in loo baahan yahay in iskaasho laga yeesho wax walba oo bulshada dan u ah, isagoo xusay in Odayaasha dhaqanka uu hormuud u yahay.
"Odayaasha waa Maamulka dhaqanka, waxa bulshada ay ku taagan tahay 20-kii sano ee dowlad la'aanta lahaa dhaqanka ayaa sal u ahaa, dadka kuwa xalin jiray waa dhaqanka, dhibaato kasta oo dhacda dhaqankii xalinayay"ayuu yiri Caaqil Xasan Cilmi Yaxye .
Waxaa uu sheegay in Odayaasha dhaqanka ay ka qeyb qaadanayaan degenaanshaha dalka, deris wanaaga iyo dadka dib la isugu soo dumo, wixii dhibaato la kala tabanaya la xaliyo.
Sidoo kale waxaa ka hadlay dood cilmiyeed Xasan Maxamed Diirshe, C/llaahi C/lle Wehliye oo labada xusay in xilliga kala guurka aanay ka faa'ideysan kooxaha kale, gaar ahaan xiisadaha in aanay Shabaab ay u noqon fursad ay uga faa'ideystaan is qab qabsiga dowladda.
Maxamed Jaamca Dirir oo ka mid ahaa madax dhaqameedyada ka qeyb galay dood cilmiyeedka ayaa sheegay in tubta toosan ay odayaasha ku hagi karaan dhanka wanaagan, dowladdana ay shacabka la shaqeyso, ayna wacyi geliso, isagoo xusay in Odayaasha aanay waligood qori qaadan.
Ugu dambeyn waxaa dood cilmiyeedka soo xiray Abuukar Sheekh Cusmaan (Abuukar Ganey) oo uga mahadceliyay Hey'adda dadaalka ay had iyo jeer ay geliso odayaasha dhaqanka, isagoo si gaar ah uga mahad celiyay Gudoomiyaha Hey'adda UYS Ciise Xasan Diinax, oo uu ku tilmaamay muwaadin u taagan in dadkiisa iyo dalkiisa wax u qabto, bulshadana u horseeda nabada iyo xasiloonida sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen.